China Wearable Air Purifier Olu olu Freshener N'elu nrụpụta na ụlọ ọrụ | Saselux
Ike (W): 1W
Voltaji (V): DC5V
Ụdị: Air Ionizer
Asambodo: EMC, ce, ETL, RoHS
Input voltaji: DC5V
Ike batrị: 700mAh
Oge nkwụ ụgwọ: 2H
Ikike (CFM): 180
Isi Iyi: Batrị, eriri
①[Ịdị Ọcha nke Ọma] Igwe ikuku ikuku ion a na -ewepụta ihe karịrị nde 120 nde na -adịghị mma iji mee ka ikuku dị ọcha iji wepu ihe mmetọ na oghere nkeonwe. Ọ nwere ike sachapụ ikuku nke ikuku dị n'ime ụlọ na ihe ndị na -emerụ ahụ n'ime ụlọ na -eme ka ọnọdụ gị na ụra gị ka mma.
②[Ibughari & na -adịgide adịgide] Obere ikuku ihe nchacha a dị nfe na kọmpat. Enwere ike kpọgide ya n'olu ma ọ bụ n'ụgbọ ala. Ọ na -ewu ewu nke ukwuu, enwere ike iji ya mepụta ikuku dị ọcha, dị mma na njem, ebe ọha ma ọ bụ ebe ndị ọzọ adịghị mma ikuku. Ka ikuku dị mma nọnyere gị ruo mgbe ebighị ebi.
③[Ndozi Noise & Gear] Ụda a na -ada nwayọ n'oge ọrụ, ọ gaghị enyekwa gị nsogbu n'oge ọrụ ma ọ bụ izu ike. Ọrụ a dị nfe, naanị pịa bọtịnụ maka sekọnd abụọ ka ị nwee anụrị ikuku. Ihe olu a dị ọcha na -arụ ọrụ nke ọma karịa ụdị ndị ọzọ iji mee ka ikuku dị ọcha. Ị nwere ike ịhazi onye na -elekọta ikuku gị dịka gburugburu dị iche iche.
④[Ndụ batrị na -adịgide adịgide] Igwe nhicha ikuku nwere obere ọdụ ụgbọ mmiri nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB, nke enwere ike iji ya ihe dị ka awa 60 mgbe awa 2 chajịchara iji hụ na ikuku dị mma ma chebe gị n'oge oge flu.
⑤[Ọrụ zuru oke mgbe ịre ahịa] Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara iji ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ X.Ping site na email, anyị ga -edozi nsogbu niile maka gị, dochie ngwongwo ma ọ bụ nyeghachi nkwụghachi zuru ezu. Afọ ojuju ndị ahịa bụ ebumnuche anyị, anyị ga -egbokwa ihe niile！
Nke gara aga: Europe nabatara Ezi Style LED Exit Sign na Europe
Osote: Smart App Control LED Ambient Light 2 ngwugwu
Portable Desktop Air purifier Sterilizer N'ihi Ki ...